Imaatinka Rabbiga, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Maxaad u malaynaysaa inay tahay dhacdada ugu weyn ee ka dhici karta masraxa adduunka? Dagaal kale oo adduunka ah? Soo helitaanka daawo loogu talagalay cudur daran? Nabadda adduunka, mar iyo dhammaan? Laga yaabee xiriiriyaha sirdoonka shisheeye? Malaayiin Masiixiyiin ah, jawaabta su'aashan waa mid fudud: dhacdada ugu weyn ee weligeed dhici doonta waa imaatinka labaad ee Ciise Masiix.
Ciise ayaa imanaya hadda
Ciise wuu soo noqon doonaa markale
waxaa qoray Norman L. Shoaf